Soo -saaraha iyo dhuumaha dhuumaha dheef -shiidka Shiinaha ee FPP | Zhaofeng
Muraayadda dhalada ayaa xoojisay tuubooyinka buufinta caagga ah-FRP dhuunta buufinta ee loo adeegsado wasakhaynta gaaska qoyan iyo qalabka nadiifinta gaaska qiiqa ee qiiqa
FRP rakibidda tuubooyinka tuubooyinka
1. Fiber-galaasku wuxuu xoojiyay tuubooyinka buufinta caaga-FRP tuubooyinka buufinta dhuxusha ee loo isticmaalo wasakhda qiiqa qoyan iyo qalabka nadiifinta gaaska qiiqa ee qiiqa Geedi -socodka iyo isku -xidhka waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro qayb kasta marka lagu rakibo goobta. Waqtigan xaadirka ah, xidhiidhka ka dhexeeya biiyaha qulqulaya iyo tuubada buufinta ee FRP ayaa asal ahaan laga beddelay isku -xidhkii flange -ka hore iyo geedi -socodkii isku -xidhka dabaysha. Habka isku -xidhka dabaysha ayaa leh faa'iidooyinka xoogga isku -xirnaanta sare, ma fududa in la daadiyo, hab fudud, dhisme habboon, iyo kharash yar.
2. Cabbirka gaarka ah ee derbiga dusha fiber -galaaska waxaa lagu go'aamin karaa hadba cadaadiska iyo dhexroorka dhabta ah. Sababtoo ah fiber -ka galaaska ah ee la xoojiyay caaggu wuxuu leeyahay heer ballaarinta kuleylka oo sarreeya, waxaa loo baahan yahay in la cabbiro, la gooyo, la isu geeyo oo la isku xiro isla heerkulka deegaanka inta dhismuhu socdo. Waxaa lagama maarmaan ah in horay loo sii diyaariyo agabyada xoojinta fiber -ka galaaska ee loo baahan yahay, hoobiye cusbi ah, xabagta xaashida, cusbi dusha iyo Wakiilka xiriirka.
3. Ku rakibidda tuubooyinka FRP-qaab-dhismeedka lakabka qalooca Qaab-dhismeedka dusha sare ee qaybta dabaylku waa inuu la jaanqaadaa dusha sare ee tuubada si loo hubiyo in waxqabadka qaybta dabayshu la jaanqaado waxqabadka guud ee tuubada. Intaa waxaa dheer, si looga hortago in dhareerku ka xumaado wejiyada dhammaadka tuubooyinka, kala -goysyada badhku waxay u baahan yihiin in lagu buuxiyo sibidhka cusbi, iyo cusbada loo adeegsado qaabaynta sibidhka waa inay la mid noqotaa dhuumaha. Haddii loo baahdo, ku dheg lakabka ugu sarreeya si aad uga hortagto in hawo soo gasho oo dillaacdo (dildilaacdo).
Qaab dhismeedka lakabka qaloocsan wuxuu u qaybsan yahay saddex qaybood oo dibadda iyo gudaha ah
A. Lakabka xira u adkaysta: Qaybtaan waxaa iska leh qaabka ugu sarreeya ee lakabka qalooca. Waxay ka kooban tahay dusha fiber-ka galaaska la dareemay, cusbi, iyo buuxiye u adkaysta. Shaqada ugu weyni waa iska caabinta daxalka iyo iska caabinta xirashada. Lakabkaan oo ka samaysan dusha sare ee muraayadda dhalada: cusbi: buuxiye u adkaysta: 1:57:38 (saamiga guud), dhumucdiisuna waa qiyaastii 0.5mm.
Lakabka ka hortagga daxalka: Qaybtani waxay ka kooban tahay lakab hodan ku ah iyo lakab dhexe. Waxay ka kooban tahay dusha fiber galaas dareemay iyo cusbi si ay u sameeyaan iska caabin ah daxalka iyo waxa uu ku yaalaa hoosta lakabka u adkaysta. Maaddada cusbi ee lakabka hodanka ku ah ayaa ka weyn 90%, dhumucdiisuna waa qiyaastii 0.5 mm; waxyaabaha cusbi ee lakabka dhexe waa 70% ilaa 80%, dhumucdiisuna waxay ku saabsan tahay 2.0 mm.
B. Lakabka xoojinta: Qaybtani waxay si toos ah ugu dhaawacantay derbiga dibadda ee dhuumaha, waxaana inta badan loogu talagalay inay iska caabiso cadaadiska iyo culayska kale. Dhumucdiisana waxaa loo xisaabiyaa iyadoo loo eegayo xaaladaha culeyska sida ku cad qaaciddada (1). Lakabkaan geedka
Waxyaabaha dufanka ku jira waa 30%-40%, oo ka kooban fiber galaas, derin fiber la jarjaray iyo cusbi. 3 Ku rakibidda tuubooyinka buufinta ee FRP-kormeerida lakabka dabaysha Kadib marka la dhammaystiro dabaysha iyo xidhitaanka, lakabka dabaysha waa in la baaro si waafaqsan shuruudaha HG/T20696-1999 “Xeerarka Naqshadeynta Qalabka Kiimikada ee Birta”, mana jirto kala-bax, delamination, dildilaaca, qoolleyda Cilladaha sida dildilaaca, fiilooyinka soo ifbaxay, dhibco qallalan, ka -mid -noqoshada, goobooyin, daloollo yaryar, iyo burooyinka cusbi waa kuwo u qalma.
Astaamaha badeecada ee tubbada rusheynta FRP
1. Waxay leedahay dahaar koronto. Dahaarka tuubada buufinta waxay ka samaysan tahay cusbi epoxy, oo ah cusbi -kululeeyaha.
2. Degganaansho wanaagsan, ma jirto falcelin kiimiko oo leh walxo badan, iska caabbinta daxalka.
3. Dahaarka dusha tuubada wuxuu leeyahay adhesion xoog leh.
4. Faa'iidooyinka badeecada. Nidaamka buufinta ee munaaraddu waxay qaadataa aalad qaybinta dareeraha gaaska oo aan buufin lahayn, kaas oo lagu diyaariyey qaybta sare ee saxanka wareegga oo leh qaab-dhismeed tuubo-buufin oo heer-sare ah. Sifada ayaa ah in la hubiyo qaybinta dareeraha gaaska oo isku mid ah, dabool daaha biyaha 360-digrii, iyo geesaha dhintay. , Darajada furitaanka ee rusheeyaha waa la hagaajin karaa, taas oo aan dammaanad ka ahayn bixinta biyaha ee loogu talagalay, laakiin sidoo kale fududeyneysa dayactirka iyo nadiifinta, oo aan lahayn shuruudo adag oo ku saabsan tayada biyaha. Dhaqidda dambaska kulaylka, biyaha maydhashada caagada ah, wax soo saarka iyo biyaha wasakhda ah ee alkaliinka ah, iyo biyo soo celinta dam dambas ayaa dhammaantood geli kara qashin -qubka dayactirku waa sahlan yahay.
5. Farsamo yaqaan fiican. Waxay leedahay awood la mid ah sida birta, isku -duubnida xooggan iyo qaab -dhismeed kelli ah oo isku -dhafan, sidaa darteed astaamaha farsamo -yaqaannadeedu waxay ka sarreeyaan maaddooyinka kuleylka guud sida PF resin iyo polyester -ka aan la karin.
6. Iska caabinta kulaylka wanaagsan, guud ahaan 80 ～ 220 ℃. Noocyada kulaylka u adkaysta ee cusbi epoxy ayaa gaari kara 200 ℃.
7. Heerka yaraanshaha dawaynta waa yar yahay, guud ahaan 1% ilaa 2%. Waa mid ka mid ah noocyada leh hoos-u-dhigidda wax-ka-qabashada hooseysa ee ka samaysan diirimaadka kuleylka, iyo isugeynta ballaarinta toosan ayaa sidoo kale aad u yar, guud ahaan 6 × 10-5/℃. Sidaa darteed, mugga ayaa is beddelaya wax yar ka dib markii la daaweeyo.
Hore: FRP tuubo laba-lakab ah
Xiga: Fiilooyinka FRP tuubooyinka FRP Flange